I-Republic of Karelia: enhlokodolobha. Petrozavodsk, Karelia: ibalazwe, izithombe
Esikhathini ntshonalanga Russian Federation kukhona omunye inhliziyo enhle kakhulu futhi othandekayo baseRussia Izindawo - I-Republic of Karelia, ogama dolobha - emzini Petrozavodsk, okuyinto kokubili sokuqondisa Prionezhsky esifundeni. April 6, 2015 Petrozavodsk waklonyeliswa isihloko - City of Military Glory.
Ukuzalwa kwayo we dolobha Karelia ubophekile ukuba uPetru mina, okwathi ngo-1703 wabeka eduze komlomo emfuleni Lososinka, ogwini Lake Onega, idolobha elihle. UMholi isakhiwo esikhulu ukwakhiwa settlement entsha, Prince Alexander Menshikov. Eyokuqala ibhizinisi idolobha ukwakha iba ifektri embuso, okuqondene iqembu amabhizinisi Russian Metallurgical - okubizwa ngokuthi Olonets yezimayini imisebenzi. amabhizinisi Zazinjalo ngesisekelo umkhakha osindayo Karelia ngaleso sikhathi.
Ngakho, kukhona Shumsky imboni yezikhali zempi, kamuva uqambe kabusha uPetru Agasti 29, 1703. Kakade ekupheleni 1703 sihlahla inikeza ukukhiqizwa Isivivinyo sokuqala. Futhi kusukela ekuqaleni 1704, ngokufutha komoya walo amaziko zifakwa ukukhiqizwa egcwele. Ngakho, izingalo wendawo ifektri yaziwa kuyo yonke iRussia. Ngu oda Umbusikazi uCatherine II ngemvume isimemezelo ngo-1772 ku-ukwakhiwa Foundry inganono, kamuva uqambe Alexander.
Le nkampani inyathelisa hhayi kuphela amasu izikhali. It wethulwa ukukhiqizwa ekubunjweni kwezobuciko nokucubungula metal. Kancane kancane Alexandrovsky Plant ikhula ngesisindo kulo lonke Russian steel wemboni. Ngokuhamba kwesikhathi, Petrozavodsk (Karelia) baba maphakathi Olonets esifundeni futhi ezidinga isimo edolobheni, futhi ngo-1784, engena isigaba idolobha yesifundazwe.
Namuhla inhloko-dolobha Karelia - yidolobha ethokomele futhi bengenisa izihambi, okuyinto njalo nesithakazelo esikhulu izivakashi kanye nabahamba ukwazi. esikhumbuzo yezakhiwo kanye zomlando ezigcinwe ngokucophelela abantu endaweni, kuvame ukuthi isiko uyaziqhenya futhi lasendulo komuzi.
ezitaladini Local nasezigcawini izivakashi ukwazi babukeka ngeke kungayitholi isikhumbuzo zingcwecwe ku izakhiwo zomlando lapho ababehlala futhi besebenza kuzo nabantu abavelele izikhathi ezahlukene. Futhi umuzi wabo engaphezu kwekhulu.
ezikhangayo zomlando e Petrozavodsk
Libizwa ngokuthini idorobha elakhiwe elikhangayo Karelia? Okubonwayo sabo enkabeni yedolobha bakhangisa eziningi lapha, njalo izivakashi abathakazelayo hhayi kuphela iRussia kuphela kodwa kusukela emhlabeni wonke. Round Square, Karelian Regional Museum, Park likahulumeni, Museum of Fine Arts, ihholo lombukiso Museum "Kizhi" - lokhu nje uhlu encane ezithakazelisayo izivakashi izindawo, okuyinto idume Petrozavodsk, inhlokodolobha Karelia.
Ngokungangabazeki, isikhungo okungokomlando Petrozavodsk kuyinto yesimanje Lenin Square. Kuyinto kule ndawo ngemva ukusayinwa isimemezelo uCatherine II ku bhunga isimo emzini Petrozavodsk bekulokhu sokuqondisa edolobheni elisha, eyayaziwa Round Square. Anikita Sergeevich Yartsov ... Nge igama mlisa kulindeleke ukuthi iqale ukwakha nje kwedolobha elikhulu.
Yezimayini unjiniyela ngokuqeqesha A. Yartsov wengamela ukwakhiwa ikusasa Alexander endaweni yokukhanda. Zonke ukuqhubeka indawo yedolobha ngokuthi Petrozavodsk (Karelia) lihlotshaniswa igama lakhe. A. Isiyingi Yartsov okuhleliwe endaweni indawo, okuyinto ahlelwe circumferentially izakhiwo ehhovisi.
On engu-100 kwasungulwa i-Alexander ifektri e phakathi Round Square kwaba lesikhumbuzo kuPetru mina, zimi phambi 1917 ngonyaka inguquko uqobo. Manje on esigcawini eponymous imele lesikhumbuzo egwadle V I. Lenina.
Eminyakeni 30 ayizange wahlala ukude zomlando of Russia nase Republic Karelia. Inhloko-dolobha ye amaphethelo angasenyakatho aleli zwe kanye nabo bonke lakuthola "charm" yokucindezelwa uStalin.
Ngo-1936, ngemva kokufa S. M. Kirova, lo umqophi Mathewu Manizer yamisa lesikhumbuzo kuye, futhi endaweni iqanjwe kabusha endaweni Kirov. Manje kule ndawo kungenziwa ngokuthi indawo ubuciko. Ngokusho iphrojekthi S. G. Brodskogo e 1953-1955 sika idrama kanye yaseshashalazini zomculo isitayela classical ezakhiwa. Eight amakholomu kanye lwaleli ngenhla kubo bakha ingxenye enkulu yencwadi ethiyetha. On lwaleli emelelwa ukubaza eyenziwe S. T. Konenkovym. izinhlobo ezahlukene itshe yemvelo isetjentiswe lezi ezakhiwe: egwadle, zemabula nabanye.
I-National Theater lakhiwa ngo-1965 futhi yakhelwe by S. G. Brodskogo. Hhayi kuphela Petrozavodsk master washiya trace yakhe zomlando, kodwa futhi neminye imizi Karelia ehlotshisiwe izikhumbuzo zakhe. On the ingxenye Kirov Square ungabona hero nendumezulu Kalevala Ilmarinen, okuyinto wadala imilingo isigayo ukudalelwa.
Empeleni leli hholo yesithathu ku isikwele - unodoli. isakhiwo Bright zokweseka endaweni - kuba Museum of ezobuciko, uyaziqhenya weRiphabhulikhi Karelia. Territory Capital has a Museum, okuyinto iyisonto omunye Iqoqo endala kwemifanekiso 15-18 eminyaka, kuhlanganise amasampula ezingaphezu kuka amabili nambili. Museum izishaya isifuba ku iqoqo yayo abaculi omkhulu Russian ezifana Polenov, Ivanov, Levitan futhi Kramskoy. Lapha ungakwazi futhi simazi kangcono umsebenzi amakhosi Karelian. Ngo 1789, yokuzivocavoca amadoda lalikhona kulendlu.
yashayisa unqenqema Onega
Indawo intandokazi sokuhamba izakhamuzi nezivakashi yedolobha iyona Onega yashayisa unqenqema. Juni 25, 1994, uSuku emzini Petrozavodsk, aphethwe wokuvula yayo.
Kukhona isiko okuhle: cishe yonke imizi Karelia babe yabo emadolobheni udade. It kuletha abantu inobungane futhi uyisibonelo ukuthula nokuzwana komakhelwane ezinhle. ukuvakashelwa njalo friendly ekucebiseni abantu ezingeni ezingokomoya, zamasiko nezomlando. Nakhu yena - Republic of Karelia. Inhloko-dolobha ye esifundeni esisenyakatho Russia akuyona ngaphandle. Petrozavodsk e 1965-2011 GG. He sungula ubuhlobo udade idolobha emadolobheni nesishiyagalombili emhlabeni.
Along Onega quay ujenga okudaliwe sculptural yamadolobha abangamawele. American Duluth ethulwa steel isakhiwo "Abadobi", "Tyube panel" idolobha wathola isipho esivela abangane German. Ngo-1996, sisuka edolobheni IsiSwidi Umea Petrozavodsk Ngithole njengesipho "Wish Tree". Lena incazelo wanamuhla nganekwane kwesihlahla black ngegolide izinsimbi lasendulo, izibonelelo ufisa. Ngo-1997, i-Onega yashayisa unqenqema uvele ingoma "negagasi ubungani" sisuka edolobheni IsiFinishi of Varkaus. Ngaphezu kwalokho, ibhange lihlotshiswe ukubaza, "Ogcwele Izinkanyezi Sky" nesithi "Mermaid nowesifazane."
Ukushiya izivakashi Petrozavodsk ukuhlangana ithatha namathafa amahle ka Karelia. emifuleni Pristine namachibi, nokuntula emaweni anezinguzunga zamadwala nasemahlathini aminyene, umoya.
Ezinye izifunda Karelia emangalisayo ezihlukahlukene namathafa zemvelo. Abaningi babo kakhulu. izivakashi isithakazelo futhi abaningi ukuheha abavakashi ukwazi.
isimangaliso Ngokhuni Russia
Kizhi - kwesinye seziqhingi 1369 ka engxenyeni esenyakatho ye-mpumalanga yesifundazwe Lake Onega. He kubhekwa isimangaliso sesishiyagalombili somhlaba futhi ngokusankondlo ngokuthi esiliva umgexo enyakatho enyakatho pearl. Lapha, esiqhingini esincane nge ubude 5.5 km, kukhona isonto ezimbili ezimangalisayo, esemgwaqweni phakathi umbhoshongo insimbi.
ubuhle wabo okushesha ngendlela edidayo. Le piece ezincane komhlaba, hhayi kuphela Lisinikeza amasampula elimangalisayo Russian izakhiwo enyakatho, kodwa futhi kunikeza ithuba ukuzizwa ukusondela okhokho bethu. Isimangaliso Kizhi Island, isimo Church, owayephila ngesikhathi kokubili ePeterhof lebukene wako.
Lonke Ensemble of Kizhi Yakhiwa engaphezu kwengu-170 inzala eziningana ngezisebenzi kakhulu kanye netingcweti temsebenti, abamagama abo engaziwa. Kunalokho emithonjeni eyayibhalwe ka ePeterhof lapha welula nesibuko surface bushelelezi yeLake Onega, khomba amazulu ezihlukahlukene zabo elingapheli. Esikhundleni sezinhlamvu olungaphambili lwesonto enwetshiwe, ehlotshiswe emaceleni eyinkimbinkimbi - amabhodi black shrine enyakatho. Domes yokuGuqulwa isimo LobuKatolika, njengezinye ubuhle kokoshniki isiRashiya, embozwe izikali silvery ngamageja. Bonke abantu abake bavakashela lezi zindawo esifundeni esisenyakatho, ngeke abakhohlwe naphakade.
Flat impophoma Kivach
Izivakashi Karelia ibalazwe kuholela kodwa kwenye indawo emangalisayo - waterfall Kivach. "Kivach" Nature Reserve ngokuthi Karelia in yesikhumbuzo. Lona omunye kulencane izinqolobane Russian. endaweni yayo - 11 amahektha. Lapha umuntu angabona yonke into okumele flora, nezilwane yokwakheka komhlaba yalesi sifunda olunothile.
Ingxenye kunazo yesiteleka landscape wendawo ubhekwa waterfall ukuthi abahambi sebejabulela ngisho iminyaka engamakhulu amathathu edlule. Kivach itholakala esifundeni Kandapozhskogo. Lokhu enyakatho-ntshonalanga Karelia, osekuyinhloko amakhilomitha 68. Kivach impophoma ibizwa ngokuthi, futhi wanika igama kuze kufike endaweni ebekelwe, eyasungulwa ngo ekuqaleni kwekhulu elidlule.
Ososayensi bakholelwa ukuthi leli impophoma lisuselwa "ikiwi" Finnish, okusho "itshe" noma Karelian "kivas" - "iqhwa entabeni". Ngempela, le Foam white kusuka esigabeni njengomuntu iphakama iqhwa-eneziqongo. Kivach ubhekwa emathafeni elikhulu Russia nezimpophoma. Lamanzi liphuma ukuphakama kwamamitha nanye, ukwakha izigaba eziningana amahle eMfuleni Suna. Iqala eduze komngcele Finnish futhi uthululela eChibini Onega, wedlula emazombezombe umgwaqo cishe 300 amakhilomitha.
Ezibhuhlungu Azipheli egeleza eduze embhedeni ezazibangelwa emachibini ezinkulu nezincane. Ngokuvumelana wakhe - Rapids ezingaphezu kwamashumi amahlanu nezimpophoma, kodwa Kivatch njalo bakhangwa abahambi kusukela kudala. Omunye izinkumbulo lokuqala impophoma kutholakala phakathi nekhulu le-16.
Kivach, indawo ugqozi
Nokho, umlando Kivach njengoba isikhungo izivakashi uqalile ekhulwini le-18, lapho wavakashela imbongi edumile Russian Gavriil Romanovich Derzhavin, owamiswa umbusi lapha. Ubuhle waterfall ephefumulelwe Derzhavina ekubhaleni izinkondlo, okuyinto uyakhazinyuliswa le ngxenye Karelian ubunjalo sihlanganisa lonke izwe laseRussia. Ngaleyo minyaka, lapho Kivach kwadingeka acwebile amandla emvelo, e Karelia usuhambe abantu ezinethonya kunazo isimo.
Yazisa impophoma emangalisayo Sifikile uMbusi u-Alexander II. Kuthiwa odokotela ebekiwe kuye umsindo wamanzi ovela. Ukuze kube lula kombusi loMfula i-Suna base ifakwe ukhululekile gazebos sokhuni amabhuloho angayazi ezisekhona kuze kube namuhla. Traveller izikhathi ezahlukene izivakashi zanamuhla ongamtshela ngisho amatshe.
ezinkulu Huge kube yisikhumbuzo labo abaye umxhwele ubuhle Karelia, okuyinto engawayekanga futhi andla nor isikhathi ukuqoba igama lakhe. Imibhalo eqoshiwe yasendulo kungabonwa abadlula ibhange kwesokudla emfuleni, lapho egandayiwe lula izintaba umzila. Kodwa kusukela amanzi ukubukwa umxhwele kakhulu yamadwala nasemigodini waterfall uqobo kuvula ngqo.
Ukuze unyawo wendlale kungenziwa wasondela kwi isikebhe somdlalo zenjoloba. Deep canyon impophoma isithombe yamadwala ukuqhuma kwezintaba-mlilo zasendulo. Leli tshe yilo ocebile slate-ezinemibala ngokuthi diabaze. He is kanzima kakhulu, cishe kabili njengoba donsile njengoba egwadle. Ngakho-ke, ngokuvamile esetshenziselwa kuvuleke ezitaladini. Idwala reserve diabase lufrenyiwe ngumuntu impophoma, ulwahlukanise izenze ukusakazwa ezimbili. Eminyakeni eminingi edlule Kivach lalilikhulu kakhulu kunalokho manje, umsindo walo lezwakala amakhilomitha amahlanu.
Karelia Izihambi ivula iminyango yayo bonke abafuna ithintane ubuhle emangalisayo nasemaphethelweni ayo. Isifunda uyaziqhenya Russia - Republic of Karelia.
Yini okufanele ibe uthisha: imithetho othisha esizayo
Amabhukumaka Visual ngoba Mozilla Firefox: nendlela yokulondoloza, ukufaka, ukumisa,
Chlorophyllipt: gargling kanye nokwelashwa angina.
Indwawo ethengisa ukudla "Vimba", Petersburg: Ikheli, amamenyu, ukubuyekezwa
Bangaki amaphesenti amanzi emhlabeni? Hydrosphere of iplanethi ngisho izingxenye
Iresiphi Yabantu ukuze nezinwele. Sembabazane kanye burdock ukuqinisa izinwele